Zithini iindleko ezirhafelwayo kuqoqosho lwakho? Ezezimali
Siza kukuxelela malunga Ezona ndleko zixhuzulwa kanye Ukuba ungafaka ingxelo yenyanga yabantu abazibhengeza ngokwabo kwingeniso.
Malunga ne amalungiselelo erhafu. Idatha esiza kuyinika kule post kulapho kuya kufuneka usoloko ucela i-invoice kwaye ungasetyenziselwa ukumisela irhafu yenyanga okanye nokuba yeyeshumi ngenyanga kuxhomekeke kwimeko nganye.
Ayonelanga kuphela cela i-invoice yeendleko Ukuba siza kukubonisa ngokulandelayo, kuya kufuneka uhlangabeze neemfuno ukwenzela ukuba ukuncitshiswa kwakho kufaneleke kwaye ngale ndlela unokuhlawula irhafu encinci ngexesha ingxelo yengeniso.
Olu luhlu lunolwazi kuphela kwaye lunokuba njalo Faka isicelo kubo bonke abantu bendalo ngaphandle kokutsalwa kuthintelwe umsebenzi wakho othile. Kwimeko yomsebenzi othile, uluhlu luya kuba lude. Ngalo lonke ixesha usenza intlawulo kuyo nayiphi na indawo ehlangabezana neemfuno ezifunekayo zokutsala okanye nangaluphi na uhlobo lweendleko, kufuneka zichaneke ngee-invoyisi ezixhasa iindleko.
1 Iimfuneko zokufaka isicelo sokuncitshiswa:
1.1 1. Ezo ziyimfuneko ngokungqongqo ukwenza umsebenzi.
1.2 2. Kufuneka ube ne-invoyisi yoqobo kwaye uthe i-invoyisi kufuneka ukuba yenzelwe iindleko zokutsalwa
1.3 3. I-invoyisi mayibe neemfuno zezemali ezihambelanayo kwimeko nganye.
1.4 4. Kule meko, isixa esikhulu kune-2.000 euro
2 Iindidi zeendleko ezinokutsalwa
3 Iindleko zolondolozo lokuthintela okanye ukulungisa
4 Amanqaku ongaze ulibale xa kufikwa kwiinkcitho ezinokutsalwa
5 Kufuneka ijongisiswe rhoqo ngonyaka kukukhawulezisa ukuhlawula amatyala.
Iimfuneko zokufaka isicelo sokuncitshiswa:
1. Ezo ziyimfuneko ngokungqongqo ukwenza umsebenzi.
Kule meko, kukho amanqaku amathathu ahlukeneyo ekufuneka eqwalaselwe xa kusenziwa isigqibo sokuba ingaba indleko ibaluleke kakhulu okanye hayi:
Eyokuqala kukuba inxulumene neshishini lakho
Okwesibini kuxa kwakufuneka ukufezekisa iinjongo ezithile zeshishini lakho
Okwesithathu kuxa kungenzeki, kunokuchaphazela imisebenzi yeshishini okanye kuthintele umsebenzi.
2. Kufuneka ube ne-invoyisi yoqobo kwaye uthe i-invoyisi kufuneka ukuba yenzelwe iindleko zokutsalwa
3. I-invoyisi mayibe neemfuno zezemali ezihambelanayo kwimeko nganye.
4. Kule meko, isixa esikhulu kune-2.000 euro
Zonke iindleko umntu wendalo afuna ukuzitsala ukuba nje isixa asidluli kuma-euro angama-2.000 XNUMX kufuneka zihlawulwe ngetsheki yokutyumba kwiakhawunti yomxhamli. Isenokuba yikhadi letyala okanye ngogqithiso lwebhanki.
Iindidi zeendleko ezinokutsalwa
por Ukuqeshisa indawo okanye indlu yorhwebo, nazo izakhiwo. Isixa serente ekuhlalwa kuso ngumntu wendalo sinokutsalwa ukuba nje ezi mfuno zingasentla ziyafezekiswa.
Ipetroli ngeveki okanye ngenyanga. Kule meko, ipetroli kufuneka ihlawulwe ngetsheki yokuchonga kwaye kufuneka ubuze ngexesha lokusekwa kukunika i-invoyisi ethi "intlawulo ngekhadi"
Umnxeba wasekhaya kunye nefowuni ephathekayo. Umrhumo wefowuni unokutsalwa ukuba nje ubungqina bokuhlawula okanye ukutsalwa ngqo kwi-akhawunti. Ii-recharges zefowuni eziphathwayo nazo zinokutsalwa, ukuba ngaba i-invoyisi ehambelana nayo ithiwe thaca.
Iindleko zamatyala ombane emsebenzini. Ibhili yombane inokutsalwa ukuba ubungqina bentlawulo okanye ukutsalwa ngqo kwetyala kuzisiwe.
Ingaba tsala ikhuriya kunye nepasela kwindawo yokusebenzela. Kwimeko yokusebenzisa ikhuriya, iinkonzo zekhuriya CORREOS, SEUR, DHL, REDPACK, PACKMAIL, FEDEX, njl njl zinokutsalwa ngaphambi kwe-invoyisi.
Iinkonzo zokujonga. Iinkonzo zokujonga ngaphakathi kwindawo okanye naluphi na uhlobo lweofisi lunokutsalwa.
Iindleko zokuhamba ngaphezulu kwe-50 km ngeenxa zonke ukusuka emsebenzini. Kwiindleko zokuhamba amanqaku amaninzi anokucuthwa. Oku kubandakanya inkcitho ekungenwe kuyo yeminquba, amatikiti ebhasi kunye neenqwelo moya kunye nendawo yokuhlala, ukuba nje ayisiyonto iphambili Ukusetyenziswa kokutya kunye nokurenta kwemoto kwindawo ekuyiwa kuyo nako kunokutsalwa nanini na xa kukho imfuneko. Ukongeza, unokongeza kolu hlobo lweendleko ezitsalwayo, ipetroli eza kusetyenziswa.
Kule meko, iindleko ezixhuzulweyo zezo zabelwe abantu abaza kwenza uhambo oluya kwenye indawo ngaphandle kwalapho basebenza khona. Ukuqwalaselwa njengeendleko ezitsalwayo kuhambo ngalunye, kufuneka ube nomgama ongama-50 eekhilomitha ubuncinci ujikeleze kwaye ube neerisithi zayo yonke into echithwe kolo hambo.
Iindleko zolondolozo lokuthintela okanye ukulungisa
Unokutsala ifayile ye- inkcitho kwizinto zokucoca. Kule meko, kufuneka ihlawulwe kwelinye icandelo ngaphandle kokutya, oku kungenxa yokuba i-pantry ayinqunyulwa ukuba i-pantry idityaniswe neemveliso zokucoca, ke kufuneka ii-invoice ezahlukileyo mazicelwe, ukuba i-invoyisi edibeneyo ayinikiwe.
Izixhasi zeekhompyuter zaluphi na uhlobo. Zonke izixhobo zekhompyutha okanye izixhobo ezifunekayo (ukusuka kwiprinta ukuya kwikhadi lememori) zinokutsalwa ngokuthi kungeniswe i-invoyisi.
Intengiso okanye iifoto ngeenjongo zokufikelela ebantwini. Unokucutha zonke iindleko ezenziweyo ezinxulumene nentengiso okanye ngayo nayiphi na imveliso ukufikelela eluntwini.
Nayiphi na inkcitho evela inkonzo yabathengi inokutsalwa xa unayo i-invoyisi
Iindleko zokutyela ngexesha lomsebenzi. Okwangoku, kufuneka kuthathelwe ingqalelo ukuba yi-8,5 kuphela eya kuncitshiswa nanini na xa umntu ekummandla ongaphezulu kwe-50 km ngakwindawo yomrhafi. Ukuze kutsalwe imali ngokuchanekileyo, intlawulo mayenziwe nge-100% ngekhadi lekhredithi okanye ledebhithi. Ukusetyenziswa kwemivalo okanye iziselo ezinxilisayo ngekhe kuncitshiswe.
Uqeqesho lwabasebenzi. Kule meko, uqeqesho olusetyenziselwa ukwandisa umthamo wabasebenzi bendawo lunokutsalwa, ngaphandle kokuba bathi abasebenzi babhalisiwe kukhuseleko lwentlalo.
Izinto ezifunekayo kuwo nawuphi na umsebenzi. Olu hlobo loovimba lunokutsalwa ukuba nje izinto zivela kumnombo wenkampani kwaye azisoze zisetyenziswe ngaphandle.
Naluphina uhlobo lweendleko zokufayilisha. Kule meko, zezo zithathwe kwimpahla nakwizihlangu ezinokutsalwa kuphela kwinto athe wayithengela yona umrhafi. Okwangoku, inkcitho eyenziwe ngabantu babo okanye inzala yabo ayixhuzulwa.
Umvuzo wabasebenzi. Ukuze kutsalwe imivuzo yabasebenzi, kufuneka babhaliswe kunye nokhuseleko lwezentlalo.
Imirhumo. Xa iifizi ezihlawulwa ziingcali ziveliswa kwinkampani, ezinje ngegqwetha okanye umgcini zincwadi, zinokutsalwa. Kufuneka kuqatshelwe ukuba iifizi zivelisa iintlobo ezimbini zokubamba, eyokuqala yi-10% kwaye eyesibini yeyesibini kwisithathu se-VAT.
Iindleko ezincwadini, iikopi okanye nayiphi na inkcitho yokubhala. Zonke iindleko zokubhala zibonakala njengeenkcitho ezincinci de imali iyonke idityaniswe. Njengokuba ziikati ezincinci kakhulu, uninzi lwezitishi azifuni kunika ii-invoice, nangona kunjalo, amatikiti anokuqokelelwa kwaye xa isixa esikhulu, abuye acele ukuba kwenziwe i-invoice ngayo yonke imali esetyenzisiweyo ngenyanga Kwishishini elithethiweyo.
Intlawulo kwimibutho yabasebenzi okanye nakuphi na okunye okuvela kolu hlobo. Kule meko, igalelo elivela kwimibutho yabasebenzi okanye naliphi na elinye iqumrhu elinje ngemibutho yobungcali okanye amashishini athile anokufunyanwa.
Naluphi na uhlobo lweendleko zemali. Olu hlobo lwenkcitho lwenziwa xa ibhanki isihlawulisa iikhomishini.
Naluphi na uhlobo lwe igalelo kwizakhiwo. Le yimali ehlawulwa rhoqo ngonyaka ngalo naluphi na uhlobo lwepropathi. Igalelo elenziwe kwizakhiwo nakwizakhiwo liphezulu kakhulu ezixekweni.
Igalelo elenziwe kwirhafu. Igalelo elenzelwe ukuhlawula iipesenti ezintathu zerhafu yomvuzo. Unako nokuhlawula intlawulo kwizithuthi okanye kwintlawulo yesicelo seepleyiti. Unokutsala naluphi na olunye uhlobo lwentlawulo oluza kwenziwa kunobhala wezemali okanye iqumrhu elithathwa njengomhlawuli werhafu.
Igalelo ngeenjongo ngokubanzi. Ezi ntlobo zemirhumo ziintlawulo ezenziwe kukhuseleko lwentlalo kunye neinshurensi okanye izibonelelo zentlalo. Ezinye zeentlawulo azitsalwa, njenge-VAT.
Amanqaku ongaze ulibale xa kufikwa kwiinkcitho ezinokutsalwa
Ngalo lonke ixesha usenza intlawulo kuyo nayiphi na indawo ehlangabezana neemfuno ezifunekayo zokutsala okanye nangaluphi na uhlobo lweendleko, kufuneka zichaneke ngee-invoyisi ezixhasa iindleko.
Kufuneka ijongisiswe rhoqo ngonyaka kukukhawulezisa ukuhlawula amatyala.
Zonke iindleko kubuchwepheshe obutsha ngokunxulumene neefowuni eziphathwayo okanye kwi-intanethi kufuneka zithathelwe ingqalelo. Zonke iindleko ezinxulumene nepetroli mazithathelwe ingqalelo. Kwakhona, isixa esihle seVAT sinokutsalwa kwimbuyekezo zerhafu.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ezezimali » Ezopolitiko kwezoqoqosho » Umgaqo-nkqubo wezemali » Iindleko ezitsalwayo
Ngaba uyafuna ukutyala imali ngokwendlela yakho yokucinga?
Iindlela ezi-6 zokunciphisa ilahleko